Maalin ka hor qalinjebinteeda ayaa la dilay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Anfac
Image caption Maryam Cabdullahi (Alle ha u naxariisto)
Image caption Maryam (Alle ha u naxariisto)
Maryam Cabdullahi waxay ka mid ahayd dadka doonayay in ay ka faa'ideystaan aqoontii ay jaamacadda ka soo heleen.
Anfac Cabdullahi Maxamed oo la dhalatay Maryam ayaa sheegay, "Lambarkeeda ayaan wacay, markii koobaad waa la iga qaban waayay, waan ku celiyay, wiil baa iga qabtay, wuxuuna igu dhahay Alle ha u naxariisto gabadhii lambarkan lahayd waa mayd waxayna taallaa hotel ku yaalla Soobe hortiisa."
"Aaabe wuu soo socday, wuxuu deganaa Britain Maanta ayuu ku soo aadanaa in uu Xamar ka soo dego, laakiin maysan dhicin in uu nolol ugu imaado ee geerideeda buu ku soo aaday, gacmihiisa ayuuna ku soo aasay," ayey hadalkeeda ku dartay Anfac.
Image caption Maryam oo ku dhimatay qarixii Soobe iyo iyo Anfac oo walaasheed ah
"Maryam waxay ahayd qof ku deyasho mudan oo dadaalkeeda iyo howlkarnimadeeda ay ku beereen in ay jeclaato waa in ay dadka caawiso," ayey sheegtay Anfac.
"Waxay qorsheyneysay in ay bilowdo tababar ku saabsan taqasuska Hooyada iyo Dhallaanka iyo qalliinka la xiriiro. Waxay dooneysay in ay bilowdo ka dib xafladda qalinjebinteeda. waxay ahayd qof hammi leh," ayey hadalkeeda ku dartay Anfac oo la dhalatay Maryam Cabdullahi.
Dad la la'yahay 48 saacadood ka dib qarixii Muqdisho